Ọ Chọpụtara Ihe Ga-abara Ya Uru ná Ndụ | Akwụkwọ Mgbaafọ nke 2015
A MỤRỤ YA N’AFỌ 1968
E MERE YA BAPTIZIM N’AFỌ 1989
ONYE Ọ BỤ Mgbe ọ bụ nwata, o si n’ime obodo gaa n’obodo mepere emepe ka ọ chọọ otú ihe ga-esi dịrị ya ná mma. Ọ nọ ebe ahụ mụta eziokwu, kemgbe ahụ kwa, o bu ụzọ achọ Alaeze Chineke.
MGBE José dị afọ iri na otu, ọ kwagara n’obodo Santo Domingo. Ihe o ji akpa afọ ya bụ itere ndị mmadụ akpụkpọ ụkwụ ha pọlish na ire oroma na ihe ndị ọzọ. N’oge ọ bụ okorobịa, a bịara mara ya ka onye na-arụsi ọrụ ike. Mgbe ọtụtụ afọ gachara, nwanne ya nwoke bụ́ Onyeàmà Jehova gwara ya lekọtawara ya ụlọ. Otu ụbọchị, José hụrụ akwụkwọ Ị Pụrụ Ịdị Ndụ Ebighị Ebi n’ime Paradaịs n’Elu Ala na tebụl ha na-anọ eri nri. O highị ụra abalị ebe ọ na-agụ ya. Ọ chọpụtara na ya ahụla ihe ga-abara ya uru ná ndụ.
N’izu na-eso ya, José gara n’Ụlọ Nzukọ Alaeze kacha nso n’ebe o bi gwa ụmụnna na ya bụ Onyeàmà Jehova. Ọ gwara ha na ya amụtala na o kwesịrị ịna-aga ọmụmụ ihe, na-ekwusakwa ozi ọma. Ọ gwakwara ha na akwụkwọ Ị Pụrụ Ịdị Ndụ ọ gụrụ emeela ka ọ mata ihe Ndị Kraịst na-ekwesịghị ịna-eme. O kwuru na ya anaghị eme ihe ndị ahụ. Mgbe abalị iri na ise gachara, ọ ghọrọ onye nkwusa. Mgbe ọnwa isii gachakwara, e mere ya baptizim. Ọ dị afọ iri abụọ na otu mgbe ahụ.
Ọrụ Nwanna José na-arụ anaghị ekwecha ya gaa ọmụmụ ihe. N’ihi ya, ọ gbara arụkwaghịm n’ọrụ ahụ, chọta ọzọ. Ma, ihe a na-akwụ ya enweghị ebe o ruru ihe a na-akwụbu ya. Ma, ọrụ nke a na-enye ya ohere ịga ọmụmụ ihe na ịsụ ụzọ. Mgbe ọ lụrụ nwaanyị, mụọ ụmụ nwoke abụọ, ọ kwụsịrị ịsụ ụzọ.
Nwanna José kpebisiri ike ibido mgbe ụmụ ya dị obere kụziwere ha Baịbụl. N’ihi ya, mgbe nwunye ya Josefina dị ime ọnwa atọ, bụ́ ime nwa mbụ ha aha ya bụ Noé, o bidoro ịgụrụ ya Akwụkwọ M nke Akụkọ Bible n’ihi na ọ ma na nwa ahụ na-anụ ihe ọ na-agụ. Tupu nwunye ya amụọ nwa ahụ, ọ gụchaarala ya akwụkwọ ahụ. Ihe a ka o mekwara mgbe nwunye ya dị ime nwa ha nwoke nke abụọ aha ya bụ Neftalí.
E mechara mee Nwanna José onyeisi n’ebe ọ na-arụ ọrụ. A na-akwụkwa ya ego ji okpukpu iri karịa ihe a na-akwụ ya n’ebe mbụ ọ na-arụ ọrụ. N’afọ 2008, o si n’ọkwá e nyere ya rịtuo ma maliteghachi ịsụ ụzọ. Na nke ugbu a, nwunye ya na ụmụ ha abụọ so ya na-asụ ụzọ. N’afọ ahụ, nwa mbụ ya dị afọ iri na atọ, nke abụọ adịrị afọ iri. Ebe ego a na-akwụ ya na-ebughịzi ibu, ya na ndị ezinụlọ ya kpebiri na ha ga-eselata aka n’otú ha si emefu ego. Nwanna José, nwunye ya, na ụmụ ha abụọ na-amụrụ ihe dị ka mmadụ iri atọ Baịbụl kwa ọnwa. Jizọs kwuru na ọ bụrụ na anyị eburu ụzọ na-achọ Alaeze Chineke, Jehova ga-agọzi anyị. (Mat. 6:33) Nwanna José na ndị ezinụlọ ya kwetara n’ihe ahụ Jizọs kwuru, ha ahụkwala n’eziokwu na Jehova na-emezu nkwa ya.
mailto:?body=Ọ Chọpụtara Ihe Ga-abara Ya Uru ná Ndụ%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D302015027%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ọ Chọpụtara Ihe Ga-abara Ya Uru ná Ndụ